Ny CVO na Covid organics no tiana ho lazaina, hoy izy ireo. Tsaroantsika fa 1 andro taorian’ny nanambarana ahamehana voalohany teto Madagasikara dia nifandrombahana ny kininim-potsy sy ravintsara fa ankehitriny dia efa io ny CVO fa voamarin’ireo siantifika malagasy ka aza mikitika zavatra hafa intsony. Hajao ny toromarika amin’ny fomba fikarakarana sy fisotroana ity CVO ity mba tsy hifanomezan-tsiny indray hoe ilay izy no nahafaty sanatria. Efa voalaza fa herinandro ihany no tokony hahavitan’ny fitsaboana aminy fa tsy mihoatra na latsaka. Aoka tsy hidirana resaka politika, hoy izy ireo ny resaka fahasalamana.